CryptoGator.co ndiyo nzvimbo yekutora nhau dzichangoburwa dzemakristcheni akadai seBitcoin (BTC) uye Ethereum (ETH), blockchain tekinoroji mune zvakawandisa uye Forex yekutengesa nhau. Isu tinopawo mukana wekuwana zviwanikwa uye magwara ekukubatsira iwe kufamba neiyo cryptocurrency uye blockchain ecosystems, pamwe nemaatomated Forex ekutengesa masheni ayo iwe aunogona kumisikidza kamwe uye uwane mari yekungoenderera uchienderera pasina kutengeserana nemaoko.
Isu tinogara tichitumira vatungamiriri uye zviwanikwa zvekuti ungapinda sei nyika ye blockchain kunyorera, kusanganisira maitiro ekuwedzera DeFi uye mamwe mapuratifomu e blockchain akavakirwa paBitcoin, Ethereum, nezvimwewo kuitira kuti ishande pamwe nekungogara uchingowana mari! Isu tinopawo otomatiki Forex yekutengesa chiratidzo chiratidzo chinokubatsira iwe kugadzira yako wega passive mari hova!
Joinha isu parwendo runonakidza kuenda munyika ye cryptocurrencies, blockchains, DeFi mapuratifomu, ICOs, decentralized social media application uye otomatiki Forex yekutengesa algorithms!
Ita shuwa yekunyorera kune yedu tsamba tsamba kuti iwe uve wekutanga kuziva nezve yedu yazvino blockchain nhau, cryptocurrency maidi uye otomatiki Forex ekutengesa masaini!
Izvo zvirimo ndezve ruzivo rwezvinangwa chete, haufanire kutora chero ruzivo rwakadai kana zvimwe zvinhu sepamutemo, mutero, mari, mari, kana rimwe zano. Hapana chinhu chirimo pane yedu saiti chinoumba kukumbira, kukurudzira, kutsigira, kana kupihwa naCryptoGator.co. Iwe uchafungidzira wega mutoro wekutarisa kukodzera uye njodzi zvine chekuita nekushandiswa kwechero ruzivo kana zvimwe zvirimo pane cryptogator.co usati waita chero sarudzo kubva pane yakadaro ruzivo kana zvimwe zvirimo. Kune njodzi dzinosanganisirwa nekudyara mu cryptocurrencies uye Forex. Kuisa mari mu cryptocurrencies uye Forex inosanganisira njodzi yekurasikirwa uye kurasikirwa kwevakuru zvinogoneka.
Dzazvino kubva kuBlog
Bank of England Kuongorora: Pound (GBP) Inoita Sei?
BoE kuchengetedza marongero emitemo, nepo njodzi dzichitsamira kune chirevo cheva hawkish. Verenga Zvakawanda
CME Boka Rinobatanidza FX Link neBloomberg Terminal
Izvo zvinobvumidza vese vatengi kuwana mitsva mitsva yeFX zvibvumirano kuburikidza neBloomberg ISV. Verenga Zvakawanda
FX Indasitiri Inochema Rufu rweLiquidity Batanidza CEO Victor Hendrix
Hendrix akashaya musi wa17 Chikumi 2021. Verenga Zvakawanda